05 / 03 / 2019 06 / 03 / 2019 Brick Fanatics 4215 Views စာ0မှတ်ချက် 75956 Quidditch ပွဲစဉ်, Brick Fanatics မဂ္ဂဇင်း, ထုံးစံဓလေ့, ဟယ်ရီပေါ်တာ, Hogwarts, ဟတ်ဖ်, Lego, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego မဂ္ဂဇင်း, ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး, ပွောငျးလှဲခွငျး, ကွမ်းခြံကုန်း, Quidditch အသံ, မြှင့်မျှော်စင်များ, Wizarding ကမ္ဘာ့ဖလား, Wizarding Harry Potter ၏ကမ္ဘာ
အစဉ်အဆက်ကြီးမားတဲ့တည်ဆောက်ခြင်း၏အိပ်မက်မက် Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ Quidditch အသံ? Brick Fanatics မဂ္ဂဇင်းထုတ် ၃ တွင်မိတ္တူပေါင်းများစွာပါရှိသည် 75956 Quidditch ပွဲစဉ် ဒါလုပ်ဖို့ - ဒီမှာတာဝါတိုင်တွေဘယ်လိုစုစည်းထားတယ်ဆိုတာပါ
Brick Fanatics မဂ္ဂဇင်း ပြဿနာ3မျိုးစုံမိတ္တူများနှင့်အတူအဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်များ၏စစ်မှန်တဲ့ကန့်သတ်စမ်းသပ်သည် Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ 75956 Quidditch ပွဲစဉ်။ အစုံ၏မိတ္တူတစ်ခုသည်မော်ကွန်းအားကစားပြိုင်ပွဲကိုပြန်လည်မဖန်တီးနိုင်ပါက၎င်းသည်မိတ္တူနှစ်စောင်ရရှိမည်ဟုဆိုလိုပါသလော။ ဒါမှမဟုတ်သုံးခုလား။ ဒါမှမဟုတ်လေးပါးလား။
အကောင်းဆုံးပုံစံကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် Potterheads မှရှာတွေ့နိုင်သောစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိသောရလဒ်အချို့ထွက်ပေါ်လာသည် Brick Fanatics မဂ္ဂဇင်း p အဖြစ်ပြIssueနာ 3.art ကျွန်ုပ်တို့၏စမ်းသပ်မှုများအရ Hogw တစ်ခုစီကိုကော်ပီနှစ်အုပ်ဖြင့်တာဝါတိုင်များကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့သည်artပိုကြီးတဲ့ဗားရှင်းကိုဖန်တီးရန်အိမ်၏မျှော်စင်။ ကော်ပီနှစ်စောင်မှအပိုင်းအစများကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ပြုလုပ်ခဲ့သည်ကိုဤနေရာတွင်ကြည့်ပါ 75956 Quidditch ပွဲစဉ်။ Wizarding World ရုပ်ရှင်မှပိုမိုကြီးမားသောတိုးတက်လာသောသရုပ်ဖော်ပုံများကိုတည်ဆောက်ရန်အတွက်ဆက်သွားပါ။
ဤတာဝါတိုင်နှစ်ခုအားတူညီသောပုံစံဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားပြီးအပြာရောင်အုတ်များသည်အစိမ်းရောင်အုတ်များဖြင့် Slytherin ဗားရှင်းကိုတည်ဆောက်သည်။
မျှော်စင်များအားလုံးတည်ဆောက်ထားခြင်းဖြင့်၎င်းတို့အားပြသထားသည့်အတိုင်းအထင်ကြီးစရာနေရာဖန်တီးရန်၎င်းတို့ကိုပေါင်းစပ်နိုင်သည် Brick Fanatics မဂ္ဂဇင်း ပြဿနာ 3။ တစ်ခုတည်းမိတ္တူ ရရှိနိုင်ပါအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့တန်ဖိုးကိုဖြစ်ကြသည်အဖြစ် 12- ပြissueနာ or 24- ပြissueနာ စာရင်းသွင်းခြင်း စတော့ရှယ်ယာများနောက်ဆုံးကျန်နေစဉ်ထုတ်ပေး 1 နှင့်2တစ်ခုတည်းမိတ္တူလည်းနေဆဲရရှိနိုင်ပါသည်။
ဒီအင်္ဂါရပ်များတွင်အသုံးပြုထုတ်ကုန်များကထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြသည် Lego Group မှ။
75956 Quidditch ပွဲစဉ် ယခုမှာရရှိနိုင်ပါသည် shop.lego.com။ သင်ကူညီနိုင်သည် Brick Fanaticsငါတို့သုံးပြီး '' အလုပ် တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
← LEGO FORMA အွန်လိုင်းညွှန်ကြားချက်များထုတ်ဝေသည်
ထိုနေ့၏အုတ်ပုံ: ကံကြမ္မာ၏ပြိုင်ပွဲ →